#कोरोना Archives - Everest Awaj Everest Awaj
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना निको हुनेभन्दा संक्रमित हुने बढी
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा गत साता कोरोनामुक्त हुने भन्दा संक्रमितको संख्या बढेको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले आइतबार अपरान्ह कोभिड–१९ सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्र्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । निर्देशनालयले अध्यावधिक गरेको विवरण अनुसार गत साता ३१९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा १८९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । २ हजार ४१४ जनामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । सोही अवधीमा संक्रमणका कारण विभिन्न जिल्लाका ५ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । यस्तै, आइतबार पनि प्रदेशमा… पुरा पढौ
काठमाण्डौं । बितेका २४ घण्टामा देशभर ५५७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने ८७७ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न भागमा रहेका स्वास्थ्यसंस्था र प्रयोगशालामा सात हजार ६२५ जनाको परीक्षण गर्दा ५५७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । छ हजार ६१ जनाको ‘पिसिआर’ परीक्षण गर्दा ५२२ र एक हजार ५६४ जनाको ‘एन्टीजेन’ विधिबाट परीक्षण गर्दा ३५ जना सङ्क्रमित भेटिएका हुन् । देशभर १० हजार २०१ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका,… पुरा पढौ
१२ हजार बढीमा परीक्षण गर्दा झण्डै ६ सयमा कोरोना संक्रमण
पोखरा । पछिल्लो २४ घण्टामा १२ हजार बढीमा परीक्षण गर्दा ६ सय बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १२ हजार ४०४ जनामा गरिएको परीक्षणमा ५९६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । सोही अवधीमा ८९१ जना संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९६।७ प्रतिशत छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु भएको छ । यो सहित संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या… पुरा पढौ
गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित घट्दै, १०५३ संक्रमित कोरोनामुत्त
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या लगातार घट्ने क्रममा रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९०६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा एक हजार ५३ जना कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएसंगै प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्ने क्रममा रहेको हो । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार अव प्रदेशमा ९ हजार ७१४ जना सक्रिय संक्रमित छन् । तीमध्य ९ हजार १० जना होमआइसोलेसनमा छन् । आज संक्रमित हुनेमध्य सबैभन्दा धेरै कास्कीका ३०३, गोरखाका ९८, स्याङ्जाका ९३, नवलपरासी पूर्वका ८५, लमजुङका… पुरा पढौ
गण्डकी प्रदेशमा हाल ४ हजार ६ सय १९ वटा कोरोनाका सकृय केस रहेका छन् । कुल १० हजार ६ सय ८८ जना संक्रमित भएकोमा ५ हजार ९ सय ३८ जना भने निको भइसकेका छन् । त्यसमध्ये ४ हजार ६ सय १९ वटा सकृय केस रहेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कात्तिक ४ गते साँझसम्ममा १३१ जनाको कोरोनाले मृत्यू भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार ६ सय १९ वटा सकृय केस रहेकोमा ३ हजार ४ सय… पुरा पढौ
करिब एक महिना अघि पथ्थरी (Kidney Stone) को दुई वटा सल्यक्रिया गरि पन्ध्र दिनको आराम पछि आफ्नो नियमित काममा फर्केको थिए! विश्व भर महामारी को रुपमा फैलिएको COVID-19 ले म पनि अछुतो रहन सकिन । बिजया दशमीको तेस्रो दिन म कन्ट्याक्ट ट्रेसिड.मा परें। त्यस पछि म पोखरा स्थित ड्याम्मसाईड मा रहेको फिस्टेल ईनमा क्वारेन्टाइन बसे. ।पाँच रात त्यहाँ रहदासम्म मलाई त्यस्तो कुनै लक्षण देखा परेन र म मेरो निवास तर्फ लागें ।पाँचौ दिनको दिउँसो गण्डकी मेडिकल कलेज मा स्वाब दिएर… पुरा पढौ